Tsipika mena amin'ny ravinkazo: ny antony sy ny fomba fifehezana - Currant - 2019
Inona no tokony atao amin'ny faritra mena amin'ny ravinkazo?
Ny zaridaina tsirairay dia maniry ny hanana vokatra sy voankazo feno voankazo ary salama isan-taona. Na izany aza, eo amin'ny lalana mankany amin'ny fanatanterahana ny faniriana tianao dia mety hiteraka aretina na bibikely. Indraindray ianao dia mila mahamarika ny fisehoan-javatra samihafa eo amin'ny ravin'ny zavamaniry iray. Noho izany dia misy tranga matetika momba ny famolavolan-toerana mena amin'ny ravinala mena - inona izany ary ahoana no fomba fitsaboana ity aretina ity, andao horesahintsika miaraka.
Antony mahatonga izany
Miady sy fitsaboana
Ahoana ny fomba hiatrehana fitsaboana
Mipoitra amin'ny loko
Famaritana sy voka-tsary
Amin'ny ankapobeny dia miseho amin'ny fararano ny toerana. Mety ho mena mena, burgundy, mena izy ireo. Amin'ny voalohany dia kely izy ireo ary mety hampitombo ny haben'ny fotoana. Indraindray dia toa mitebiteby izy ireo. Afaka miseho amin'ny ravinkazo mena sy fotsy izy ireo, ary matetika no mainty mainty. Ny trangan-javatra toy izany dia tsy ilay hany tokana misy ifandraisany amin'ilay orinasa sy ny tompony. Amin'ny ankapobeny dia miaraka amina fanandramana amin'ny tsirony izy - amin'ny voankazo kokoa sy mihandrona. Raha tsy mifantoka amin'ny olana ianao amin'ny fotoana ary tsy manomboka miatrika izany, dia hiparitaka any amin'ny faritra midadasika kokoa - ny sampana dia afaka mihalehibe sy maina, ary tsy ho ela ny tsorakazo manontolo.
Fantatrao ve? Ny currant amin'ny teny latinina dia antsoina hoe ribas. Ny loharanon'ity anarana ity dia mahaliana. Taorian'ny nandresen'ny vahoaka Arabo an'i Espaina tamin'ny taona 711, ny solontenan'izy ireo dia tsy nahita ny zava-mamy tiany indrindra any amin'ireo tany vaovao - rharbarb, izay nomen'ny Arabo ny sakafo rehetra. Rehefa nahita ireo voankazo mena izy ireo, ny tsiro izay nampahatsiahy azy ireo ny Rharbar, dia nanomboka niantso azy ireo koa izy ireo. Ka ny rindrina no mijanona io anarana io.
Misy antony roa mahatonga ny fijery mena amin'ny ravinkazo:
anthracnosis aretina fungal;
pesta antsoina hoe blabla gallic.
Anthracnose dia natsangan'ny holatra Colletotrichum orbiculare. Miely patrana, bibikely ary rivotra ireo spores. Ny antony mahavariana amin'ny fihanaky ny aretina dia ny hafanana, ny toetr'andro mafana, ny asidra goavam-be ao amin'ny tany, ary ny tsy fahampian'ny potassium sy ny fosiran'ny zavamaniry.
Ny iray amin'ireo aretina mampidi-doza indrindra amin'ny riandrano dia ny harafesina.
Ny soritr'aretina voalohany amin'ny aretina dia ny endrik'ireo faritra kely mena mainty manerana ny ravina. Rehefa mandroso ny aretina, mitombo ny teboka, mihamaro izy ireo, ary tafiditra ao anatin'ny toerana iray lehibe. Ny ravina dia mihosim-bovoka ary manalefaka. Miaraka amin'ny aretina mafy, dia azo jerena amin'ny tifitra koa ny toerana. Aorian'izay dia miseho eo amin'izy ireo ny kitrony, lasa mora vaky izy ary maty ny zavamaniry amin'ny farany. Indraindray dia mety hisy vokany eo amin'ny voankazo koa ny holatra.
Ny fisehoan'ny aretina dia mitranga amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny volana Jona. Tonga any an-tampony izy io amin'ny tapany faharoa amin'ny fahavaratra.
Amin'ny habak'io aretina mena io dia azonao atao ny mijery ny sary, ary ny fomba hanatanterahana ny fitsaboana azy, dia hodinihintsika etsy ambany.
Ny gonika na mena mena dia misy bibikely kely misy loko kely - 2.2-2.5 mm amin'ny lavany. Mety misy loko hafa - avy amin'ny mavo ka hatramin'ny mainty. Tahaka ny karazana endriny hafa rehetra, dia miaina eo amin'ny faran'ny takelaka vy. Ny lohataona dia mametraka ny atody amin'ny ririnina ao anaty rotsa-nify. Ny vehivavy mavomavo dia manidina amin'ny herinandro voalohany amin'ny fahavaratra. Amin'ny vanim-potoana, hatramin'ny taranaka valo. Ny volana Jolay, ny aphid dia manomboka amin'ny karazan-tsimparifary, ary amin'ny fararano dia miverina any anaty voaroy kesika ny lay.
Ny soritr'aretin'ny fipetraky ny zavamaniry dia bozaka - fiorana amin'ny endriky ny biriky eo amin'ny tendrony ambony. Koa satria misotro toaka avy amin'ny kirihitra miaraka amin'ny zavatra ilaina ny siramamy, mba hanasitranana ireo ratra dia manomboka ny taova manokana ao amin'ilay orinasa. Noho izany dia mitombo ny fitomboan'ny tranokala.
Fantaro ny fomba hiatrehana ny bibikely hafa maniry: aphids, ophthalmia, shield.
Ny fahasimbana goavana amin'ny fiparitahan'ny masoandro dia mametraka hazo madinika. Ny fepetra tsara ho an'ny fiainana mavitrika dia ny ririnina mafana sy ny lohataona mafana tsy misy orana.
Fantatrao ve? Misy karazana varimbazaha maro - eo amin'ny 150 eo ho eo, ny lokon'izany dia voasarona amin'ny loko samihafa. Ankoatra ny kodiarana mena, mainty sy fotsy, ny natiora dia misy ihany koa mavo, volomparasy, volomparasy ary maitso. Samy hafa amin'ny tsiro sy ny votoatin'ny sakafo ireo.
Toy ny amin'ny fisehoan'ny aretina hafa na ny parasitika amin'ny zavamaniry, ny anthracnose sy ny endri-kozatra dia mety hiady amin'ny fepetra fisorohana, ny fitsaboana ny fitsaboana amin'ny ankapobeny (fanesorana sy ny fiotazana ny zavamaniry amin'ny bibikely, ny vahaolana amin'ny savony) ary ny fitsaboana simika. Hevero ireo fepetra sy fepetra hafa hiadiana amin'ny ravina mena.
Anisan'ny fomba fanao mahazatra hiadiana amin'ny gilaoby ny manaraka:
Fampidiran-tsokosoko. Ahiahy ary afokasoka ireo saka hoditra ka ny antsasa-manila dia tokony ho antsasaky ny siny (5 litatra). Omeo ny voninkazo miaraka amin'ny siny rano mafana ary avelao hiditra mandritra ny 48 ora izy ireo. Ampio savony 50 g ny savony fanasan-damba. Ampiasao ny ravinaratra.
Fampidiran-tso-tsimparifera miaraka amin'ny voanio onion. 2 kg tonta voatabia mandoaka rano dimy litatra. Alaivo ny vahaolana mandritra ny ora roa, ary andramo mandritra ny adiny telo. Mandehana mamono lamba. Mandrindrana rano amin'ny tahan'ny iray na roa. Ny lanjan'ny vala dia manondraka roa litatra amin'ny rano mando, manindry 48 ora. Ampio rano 2 litatra sy savony ny savony toy ny adhesive. Ny tadin-tsiranoka sy ny fanasitranana ny hafanana ary ampiasaina amin'ny famafazana.
Famaranana ny vovoka paraky. Ny antsasak'ilay kapoaka vovoka dia manondraka rano iray ary tapaho mandritra ny 30 minitra. Aorian'ny fandroahana rano avy ao amin'ilay lavitr'afo dia ampidiro ao anaty volombava ny rano. Mijanona ao anaty toerana maizina mandritra ny 24 ora. Aorian'izany dia alefaso amin'ny gaza ny ron-tanana mba hanivanana sy hanampiana savony anaty rano (10 litatra) na savony fanasan-damba. Mampiasà famafazana.
Famafazana savony fanasan-damba. 300-400 g ny savony lavalava amin'ny rano 400 ml. Ampiasao amin'ny famafazana na fanesorana ny ravina, amin'ny fikarakarana manokana ny ambany sy ny tsilo.
Fampidirana vovobony menamena. Ny vovoka (10 g) dia mihena amin'ny rano litatra ary atambatra mandritra ny 48 ora. Misorata anarana. Ho an'ny fiparitahana, raiso 200 ml ny fofona ary avelao ny rano 800 ml.
Fampidirana mena. Manapotika pifolon'ny dipoavatra ary apetraho ao anaty fitoeram-bobongolo. Hanampy tavoahangin-drano ary manasa ora iray. Mandritra ny roa na telo andro. Aretina. Ho an'ny fipoahana dia ampiasaina 150 ml ny fampidirana, mamerina azy ireo amin'ny siny rano.
Zava-dehibe izany! Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny dia tanterahina mandritra ny fito ka hatramin'ny folo andro farafahakeliny in-droa. Ny famafazana sy ny fanesorana dia atao amin'ny andro tsy misy orana sy rivotra. Raha elaela aorian 'ny fitsaboana dia misy ranonorana, dia apetraka indray ny fiparitahana.
Ny fanafarana volonkoditra dia mahomby raha tsy amin'ny faharesena kely fotsiny amin'ny ambaratonga voalohany. Raha toa ka tsy nanampy azy ireo amin'ny mena ny ravina, na raha misy fanafihana goavam-be dia hita, dia tsara kokoa ny fomba fitsaboana ny mena midorehitra amin'ny fitaovana simika, raha tsy efa noforonina.
Miaraka amin'ny faharesena kely avy amin'ny bibikely manimba, dia ny fanampiana ny biopreations dia: "Fitoverm", "Biotlin", "Agravertin". Ny tombontsoa amin'ny fampiasana ireo bibikely ireo dia ny fanararaotan'izy ireo ny tontolo iainana sy tsy misy fiarovana ho an'ny olombelona.
Raha toa ka tsy azo alaina ny fiparitahan'ny fiparitahana mahery vaika, dia mila mampiasa simia. Ankehitriny, ireo zava-mahadomelina izay nanolo-tena mafy amin'ny tenany amin'ny ady amin'ity bibikely ity dia: Aktellik, Inta-vir, Konfidor, Calypso, Kinmiks, Aliot.
Tsy maintsy tsaroana fa ny fampiasana ny simika alohan'ny fijinjana dia voarara tanteraka. Vakio tsara ny torolàlana momba ny zava-mahadomelina, izay manondro ny fandaharam-potoana farafahakeliny izay tokony hojerena eo amin'ny akora simika sy ny fambolena. Ny ravina Currant, izay nipoitra noho ny anthracnose, dia nesorina sy nodorana talohan'ny fikarakarana zavamaniry misy fungicides. Raha misy fiantraikany mahery vaika, tsara kokoa ny manimba ny kirihitra.
Ho an'ny fitsaboana ampiasain'ny anthracnose: Oxyhom, Home, Abiga-Peak, Skor, Fundazol, Ridomil Gold MT, Gold Profit, sns.
Koa satria ny holatra sy ny bibikely dia afaka ampiasaina amin'ny zava-mahadomelina, dia tokony ho efa niova na niova izy ireo. Hahomby kokoa ny fisorohana sy ny fanaraha-maso.
Zava-dehibe izany! Rehefa manondraka zavatra simika dia tokony hanaraka tanteraka ny torolàlana momba ny dosage sy ny faharetan'ny fitsaboana, ary koa ny fepetra fiarovana manokana: tokony hiaro ny vatana ny akanjo, maso - jiro, orona sy vava - hanafina.
Mba hisorohana ny fisiahana amin'ny gall, dia tokony hatao ireto manaraka ireto:
manaisotra matetika ny tsimparifary;
Mitondra ranon-tsavony Bordeaux (3%) na zava-mahadomelina hafa mitovy amin'izany;
manamboatra fialana famonoana bibikely alohan'ny fialambolimbolina, ohatra, miaraka amin'ny vokatra roa amin'ny Iskra, ny prophylactine ary ny nitrafen;
Mamboly atody akaikikaiky ny kiran-trondro, dipoavatra, cumin, cilantro, voanio mba hanintonana bibikely mahasoa (kardinaly, earwigs, maitso-maso, hoverlings) izay mihinana bibikely;
Mamboly ranom-boankazo maniry fofona mani-pofona izay afaka mampihorohoro tsikelikely, ohatra, rameva, calendula, marigolds;
Manimba ny havoana antitra ary mamotika antsantsa-pamoloana vaksin-kafe;
alohan'ny hanangonany sy hambolena farihy amin'ny rano mafana (+ 80-90 °), dia hamono parasy rehefa avy ny fiotazana.
Mba hisorohana ny aretina anthracnose dia mila:
Ny lohataona manondrahana ny ranomamy Bordeaux, Nitrafen, sulfata varahina;
mialoha ny voninkazo, dia manadio miaraka amin'ny fikarakarana ny "Epin", "Zircon", "Immunocytophyte";
manangom-bokatra tsara, manatsara ny faharetan'ny kolontsaina;
Raha ny fahalavoana, dia esory tsara ny ambim-bary ary asio lavaka lalina eo amin'ny tavy;
taom-pijinjana, nitsimoka ny ranomainty Bordeaux;
manangona tsimparifary tsotsotra;
mihintsana ny fandefasana entana;
misafidy varim-bazaha izay manohitra io aretina io, ohatra, Victoria, ilay mena holandey, ny lahimatoa.
Ny fanaovana ireo asa tsotra ireo, dia afaka misoroka ny fampandrosoana ny aretina sy ny fanafihana parasy, ary koa mamonjy ny tenanao amin'ny halalin'ny fisainana sy ny fitadiavana ny fampahalalana momba ny fomba hiatrehana ireo ravinkazo mena.
Fantatrao ve? Ho an'ny olona iray mba hanomezana fahafaham-po ny filany isan'andro amin'ny ascorbic asidra, dia mila mandany rakotra mainty 35-40 izy.
Ny Currant dia taho mamy sy mahasalama: amin'ny endriky ny ascorbic content, dia tsy misy mitovy amin'ny voankazo sy voankazo. Ny zavamaniry dia tsy mendri-piderana eo amin'ny fikarakarana ary manome lamosina malala-tànana. Na izany aza, io kolontsain'ny kolontsaina io dia mety amin'ny aretina sasany sy ny fanafihan'ny bibikely. Zava-dehibe ny fanatanterahana fitsaboana amin'ny fotoana sy ny fanatanterahana ny fotoana ara-potoana, mba tsy hamoahana ny vokatra, ary indrindra ny fambolena voajanahary amin'ny ankapobeny.
Ny endriky ny fambolena sy ny fikarakarana alstroemeria
Ny fomba hiatrehana ny mozamboky amin'ny zavamaniry any an-trano: ny antony, ny fisorohana sy ny fitsaboana ny volokano
Famaritana sy sarin'ireo karazana voankazo sy karazam-borona
Nahoana ny lakana no mamoaka ny tongony?
Tolo-kevitra momba ny halavan'ny minitra sy ny fomba handraisana ny tsimok'aretin'i Brussels
Toby, hatsembohana, fahazavana ary zavatra hafa takiana amin'ny fanangonana ovy amin'ny ririnina
Fomba hisafidianana tsimok'aretina
Sangisangy ahitana ny fifantenana Moldaviana - Trakta Senatora
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Inona no tokony atao amin'ny faritra mena amin'ny ravinkazo?